Xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka, Antony Blinken, oo canbaareeyey, xarigga lagula kacay 200 oo qof oo ka mid mucaaradka Ruushka | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka, Antony Blinken, oo canbaareeyey, xarigga lagula kacay 200...
Xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka, Antony Blinken, oo canbaareeyey, xarigga lagula kacay 200 oo qof oo ka mid mucaaradka Ruushka
Booliiska Ruushka ayaa xirxiray boqolaal ruux oo ku shirsanaa hoteel isla markaan isaga kala yimid dacallada dalkaas, kulanka ayay ugu diyaar garoobayeen doorashooyinka deegaanada ee dalkaas.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka, Antony Blinken, ayaa canbaareeyey, xarigga lagula kacay 200 oo qof oo ka mid mucaaradka Ruushka. Qoraal uu ku daabacay bartiisa twitter-ka ayuu ku sheegay inuu ku baaqayo in la soo afjaro gaboodfallada ka dhanka ah dadka sida madaxa bannaanka codadkooda u muujinaya.
Dadka ay booliska xireen ayaa waxaa ka mid ah xubno ka tirsan Mucaaradka oo ku sugnaa hoteelka ay booliska u dhaceen. Booliska ayaa la sheegay inay xireen dhammaan dadkii ku sugnaa halkaasi.
Sida laga soo xigtay booliska, sharciyada fayraska corona ayaa la jabiyay, waxaana munaasabadda isku soo dubariday urur aan loo baahnayn.
Dhacdadaan ayaa ku soo beegmeysa iyadoo ay weli sii socdaan weerarrada ka dhanka ah munaasabadaha mucaaradka ee la xiriira doorashooyinka.
Bishii la soo dhaafay hogaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny, ayaa la xiray ka dib markii lagu soo eedeyay inuu jebiyey shuruudihii xabsi ciqaabeed ee ganaaxa isagoo Jarmalka u joogay ka soo kabashada weerarkii sunta neerfaha ee lagu eedeeyay Aqalka Kremlin-ka.
Xubnaha sarsare ee mucaaradka oo ka socday daafaha Ruushka ayaa ka qeyb qaadanayay shirkii Moscow ay booliska bartilmaameedsadeen. Xubnahaan ayaa ka arrinsanayay istiraatiijiyadda doorashooyinka baarlamaanka ee dhacaya Sebtember.
Warbixin laga soo daayay telefishinnada ayaa muujinaysa mucaaradka oo lagu guraya gawaarida booliska waxayna sheegeen booliska in dadka la xiray aysan wadan qalabka gaarka ah ee loogu talagay difaaca fayraska corona, sidaa darteedna ay jabiyeen shuruucdii fayraska.
Ururka aan loo baahnayn ee ka midka ahaa shirka ayuu booliska ku sheegay Open Russia.
Open Russia waxaa UK ku aasaaay Mikhail Khodorkovsky, oo mucaarad ku ah madaxweyne Vladimir Putin.
Khodorkovsky ayaa 10 sannadood xabsi ku jiray, waxayna qareenadiisa sheegeen in kiiska lagu soo oogay uu yahay mid been abuur ah.
Hase Yeeshee waxaa markii dambe cafis u fidiyay Putin.
Ururka Open Russia waxaa mas’uuliyiintu ku eedeeyeen inuu jabiyay shuruucda Ruushka ee mamnuucaya kooxaha ajaanibta ah ee loo arko inay siyaasadaysan yihiin wuxuuna ururka ka mid noqday ururo dhowr ah oo lagu tilmaamay kuwa aan loo baahnayn.
Laakiin mid ka mid ah shakhsiyaadka mucaaradka ee shirka joogay, Andrei Pivovarov, ayaa sheegay in runti ay kulanka soo abaabuleen koox loo yaqaan United Democrats.
Mucaaradka xabsiga loo taxaabay ayaa la filayaa in la ganaaxo ama ay muddo ay ku jiraan jeelasha.
Previous articleMaleeshiyaadka Al-Shabab oo dhibaato argagax leh ku haya shacabka dalka Mozambique
Next articleHoggaamiye mucaarad dalka Myanmar oo wacad ku maray inuu sii wadi doono kacdoonka ka dhanka ah militeriga
Weerar ka dhacay magaalada Kismaanyo kaa oo geestay Qasaaro kala duwan
Mohamed Abdullahi Mohamed - January 19, 2021 0
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ee maamulka Jubbaland ayaa ku waramaya in xalay weerar bambaano lagu qaaday goob maqaayad ah ay...
Madaxweynihii dalka Chad Idriss Deby oo goor dhawayd la dilay dalkaasi...
Sarkaal sare oo u dhashay Ruush ah oo ka...
AMISOM oo sheegTay in ciidamadooda ka socda Uganda ay isaga...
Madaxweyne Uhuru Kenyatta “ Cidna kama aqbaleyno in ay sheegato...
Qof qaadsiiyay 22 qof Covid-19 qaadsiiyay oo lagu xiray dalka...
madaxweynaha Falastiin, “ Israa’iil Waa Argagixiso waxayna gashay...
Gen Maxamed Xasan Xijaar oo faray dhammaan Ciidanka Booliska...